Nasashada Isbuuca Iyo Sheeko Aad U Xiiso Badan Wiilkii Aabihiis La Dardaarmay..!! - iftineducation.com
iftineducation.com – Nin ayaa sii sagootinayay Aabihii oo waayeel ah Safarna u ahaa Gobol kale. Markuu Baska saaray ayuu ku yiri, “Aabe ha hilmaamin Tuulo hebel” wuuna ka tagay.
Darewalki ayaa ugu jawaabay, “Weli ma dhowa” Xoogaa markay socdeen ayuu Odaygi hadana isla su’aashi weydiyay, Darewalki oo markaan xanaaqsan ayaa ugu jawaabay, “Adeer weli weeye, iska aamus”.
Hadana mar saddexaad ayuu odaygi intuu istaagay weydiiyay, “Tuula Hebel ma la gaaray?” Darewalki oo markaan aad u carooday ayaa ku yiri, “Maya ee Adeer naga fariiso”. Rikoorka ayuuna daaray oo codka yara dheereeyay.